Raha izaho tsy dia be mpankafy ny sakafo, ny ankamaroan 'ny namany sy ny daty efa tena nanambara foodies. Zavatra tsy teny fotsiny hoe maka sary ny sakafo sy ny famoahana azy io ny haino aman-jery sosialy. Foodies ireo mpifoka sakafo, ary izany dia amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny foodies ahy izay nianarako fa tena lavitra izy ireo no handeha ho hanina.
Food dia ny zava-drehetra
Ny fiankinan-doha amin'ny sakafo na inona na inona mandeha mihoatra noho izay azonao atao sary. Sakafo no voalohany sy farany laharam-pahamehana ny andro. Ary, tsy misy andalana voasarika mba hahita ny “tonga lafatra” sakafo singa. Miomana mba handeha lavitra be fa ny tsara fotsiny frezy.
“Hankafizana ny tsirony”
Foodies ireo manam-pahaizana raha ny amin'ny sakafo pairings. Raha Manoro hevitra mihinana trondro miaraka amin'ny vary, na fampifangaroana sauces roa miaraka, mandehana miaraka aminy. Mety ho ny soso-kevitra dia hanokatra ny masonao kokoa flavorful sakafo.
Foodies koa ny mirona mba hankafizana tsirony amin'ny tsikelikely nanandrana ny sakafo. Na dia mety ho toa adaladala, dia tena hanampy anao hahatakatra kokoa izay sakafo kosa dia afaka soa ny fifandraisanareo.
Na izany Yelp na Google, avy hatrany rehefa miezaka ny trano fisakafoanana na lovia vaovao, ny foodie ho faly loatra momba ny fanoratana ny famerenana ho toy ny foodie, dia mahatsapa ny andraikitra mba mampahafantatra foodies hafa ny vaovao hita nahita.
Omano ny fotoana manodidina ny mihinana
Daty sy ny mandeha dia resaka sakafo. Mety ho izy ireo no nanao siny lisitra tsy maintsy-miezaka vilia sy ny toeram-pisakafoanana. po azy ireo, hijery ny lisitra ka hitondra avy vitsivitsy ireo trano fisakafoanana izay te-hanandrana.
Foodies ho namana tsara indrindra amin'ny lohamilina tany amin'ny toerana tena trano fisakafoanana. Tsy vitan'ny hoe samy mahazo ny hifandray ny sakafo, fa mahazo ny mahafantatra ny lohamilina dia afaka mitarika ny fihenam-bidy sy / na miafina vilia. Koa, manana ny toerana tena lohamilina dia midika fotsiny ho any izany trano fisakafoanana rehefa mpanolotra miasa.
Tsy vitan'ny hoe ny foodie te hisakafo avy, fa ny ankamaroany dia tena azo inoana fa ho mora raisina ao an-dakozia. Raha mahazo ny hanandrana fomba fanamboarana matsiro, foodies dia ho “very” tao an-dakozia nandritra ny ora maro. Rehefa manao mahazo ao amin'ny fandrahoan-tsakafo, toe-po, Manoro hevitra aho manatevin-daharana azy ireo ao an-dakozia mba mandany fotoana amin'izy ireo.
Hatrany mahalala ny toerana misy ny fivarotana
Ianao tsy mahalala, raha mety mila zavatra. Foodies tsy mahalala izay misy ny mpivarotra no akaiky indrindra, fa izy ireo ihany koa ny mahalala ny ora. Aoka ianao ho vonona hanao minitra farany mpivarotra mihazakazaka.
Niaraka ny foodie foana traikefa nahafinaritra. Amin'ny mamihina ny adala, toy ny fiankinan-doha, dia antoka tsy ho noana noho ny fitiavana indray.